ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယုံကြည်လာစေမည့်ပါပလော Neruda စကားစုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ပါပလောနီရိုဒါသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိစာပေများတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်နာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့မှာအရေးအသားအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုရှိပြီးကဗျာဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ သူသည် ၁၉၀၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် Parral (ချီလီ) တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၇၃၊ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်သေဆုံးခဲ့သည်။ သူသေဆုံးရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုလူသိများခြင်းမရှိသော်လည်းသူသည်အဆိပ်သင့်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ။ တကယ်တော့သူ့နာမည်က Ricardo EliécerNeftalí Reyes Basoalto ဖြစ်ပြီးသူဟာချီလီနိုင်ငံသားပါ။ သူသည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်စာပေဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးအောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည်မလုံလောက်သကဲ့သို့၊ သူသည်ကဗျာဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အပြင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ် ဦး လည်းဖြစ်သောအထက်လွှတ်တော်အမတ်လည်းဖြစ်သည်။ သူသည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ဗဟိုကော်မတီတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးချီလီသမ္မတ၏သမ္မတအဖြစ်နှင့်ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ... ထိုကဲ့သို့သောတက်ကြွသောအသက်တာရှိသော်လည်းသူသည်စာပေနယ်ပယ်တွင်အမြဲတမ်းထင်ရှားနေသည်။
သူသည် ၂၀ ရာစုစာပေ၏အထင်ရှားဆုံးစာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူရေးသားခဲ့သောစကားများကြောင့်သူ၏ဘ ၀ နှင့်သေဆုံးပြီးနောက်သူအားအဘယ်ကြောင့်အသိအမှတ်ပြုရသည့်အကြောင်းရင်းအချို့ကိုအောက်တွင်သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သူ၏စကားများသည်သင်၏နှလုံးသားကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေသည့်အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်။ သူ၏အလုပ်မှာ ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်ခဲ့သည်၊ အကြောင်းမှာသူ၌သူ၏ကဗျာများကိုထူးခြားစေသည့်ထူးခြားသောလက်ဆောင်တစ်ခုရှိသည်မှာသေချာသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ဘဝအကြောင်းကို Pablo Neruda မှ 37 ကိုးကားသည်
ချယ်ရီပင်များနှင့်နွေ ဦး ရာသီ၌သင်ဘာလုပ်သနည်း။
သူတို့သည်ပန်းများအားလုံးကိုဖြတ်နိုင်သော်လည်းနွေ ဦး ကိုမရပ်နိုင်ပါ။
ပြproblemsနာများကိုမပြုံးခြင်း၊ သင်လိုချင်သောအရာအတွက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်၊ သင်၏အိပ်မက်များအကောင်အထည်ပေါ်မလာရန်တားမြစ်ထားသည်။
အမြဲစောင့်ဆိုင်းနေသူသည်မည်သူ့ကိုမှတစ်ခါမျှမစောင့်ဖူးသောသူထက် ပို၍ ခံစားရသလော။
ငါဟာပင်လယ်မှာရှိတဲ့ငါ့ရဲ့ထက်ဝက်နဲ့ငါ့ရဲ့ဝိညာဉ်တစ်ဝက်နဲ့ငါကြည့်နေ၊ နားထောင်နေတယ်။ ငါ့ရဲ့စိတ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ကမ္ဘာကိုကြည့်နေတယ်။
မျက်ရည်မကျတဲ့မျက်ရည်များသည်ရေကန်ငယ်များတွင်သူတို့စောင့်နေကြသလောသို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းမှုဆီသို့ ဦး တည်နေသောမျက်မြင်မရသောမြစ်များလော။
လိပ်ပြာအိပ်မက်၊ မင်းငါ့စိတ်နဲ့ဆင်တူပြီး melancholy ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆင်တူတယ်။
ပျော်ရွှင်မှုသည်အပြင်ဘက်တွင်မဟုတ်ဘဲအတွင်းအပြင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်သည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာမှသော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြသနာများ၊ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခြင်းမရှိဘဲသင့်ကိုတိုက်ရိုက်ချစ်သောကြောင့်သင်ကိုချစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားမည်သည့်နည်းဖြင့်မချစ်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်မိမိပူဖောင်းပေါ်၌ရှိသည့်အခါ၎င်းဆုံးရှုံးသောအခါ၎င်းငိုသောအခါသူကလျစ်လျူရှုသည့်ဘောလုံးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်မလုပ်ပါနှင့်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ နမ်းရန်နည်းလမ်းဘယ်လောက်များများ၊ သင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အလွန်အထီးကျန်ဆန်မည်!
သူတို့ကဖြေကြားခြင်းမရှိဘဲခေါ်ဝေါ်နေကြသည့်အရာဝတ္ထုများနှင့် ၀ မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းခြင်းနှင့်သက်သာခြင်းမရှိသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနှင့်ရှုပ်ထွေးသောနာမည်တို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တွင်မည်သည့်ပရောဖက်ပြုချက်ပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းကြသည်။
လေယာဉ်မှူးတစ် ဦး ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ မျက်စိကန်းသောရေငုပ်သမား၏အမျက်ဒေါသ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏တိမ်တိုက်မူးယစ်ခြင်း၊ သင်၏အရာအားလုံးသည်သင်္ဘောပျက်ခြင်းဖြစ်သည်!
အဝတ်အချည်းစည်းသင်သည်သင်၏လက်များထဲမှတစ်ခုကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ ချောမွေ့။ ၊
မင်းခြေထောက်တွေကိုငါချစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာကုန်းမြေ၊ လေ၊ ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ထွက်လာပြီးငါ့ကိုမတွေ့ခင်အထိပါပဲ။
သူမ၏ပိုမိုနီးကပ်စွာရောက်စေလိုလျှင်, ငါ့အကြည့်သူ့ကိုရှာတတ်၏။ ငါ့နှလုံးသားကသူ့ကိုရှာနေတယ်၊ ​​သူမကငါနဲ့မဆိုင်ဘူး
ငါဒီညဝမ်းနည်းစရာအခန်းငယ်တွေကိုရေးနိုင်ပါတယ်; ဥပမာ - ရေးပါ။ ညသည်ကြယ်ဖြစ်ပြီးအပြာရောင်ကြယ်များသည်အဝေးမှတုန်ခါနေသည်။
မျိုးစေ့သည်နေရာတိုင်းမှခုန်ချသည်။ အတွေးအခေါ်များအားလုံးသည်ထူးခြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုနေ့တိုင်းမျှော်လင့်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့ဘ ၀ ၏ပြောင်းလဲမှုကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်အသက်ရှင်သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမမြင်ရပါ၊ ခံစားရသည်၊ ပို၍ ပင် ပို၍ ပင်သူမသည်သင်နှင့်အတူရှိနေသောအခါဖြစ်သည်။
မသွားဘူးသောသူ၊ စာမတတ်၊ တေးဂီတကိုနားမထောင်သောသူမူကား၊
မင်းနဲ့အတူငါနဲ့အတူသွားနေတုန်းငါနင့်ကိုထိမိပြီးဘဝကရပ်တန့်လိုက်တယ်။ မင်းမျက်လုံးထဲမှာမင်းစိုးစံနေပြီးမိဖုရားတွေဖြစ်တယ်။ တောအုပ်၌ရှိသောမီးခဲကဲ့သို့၎င်း၊
မျက်စိထက်ပိုစိတ်ဝင်စားစရာဘာမှမရှိဘူး။ သင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ၏မျက်လုံးများကိုကြည့်ပြီးနေပြီလော။ ချစ်ရသူနှင့်မချစ်သောသူ။ သူငယ်ချင်းနှင့်အသိအကျွမ်း၏။ သူဌေးနှင့်အလုပ်ဖော်။ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့လူအိုတစ်ယောက် ...
ငါဒီမြို့မှာကြီးပြင်းလာတယ်၊ ကဗျာတောင်ကုန်းနဲ့မြစ်ကြားမှာမွေးဖွားလာတယ်။ မိုးရဲ့အသံကိုယူပြီးသစ်တောလိုသစ်တောတွေကိုစိုစွတ်လာတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်မှကယ်တင်ခြင်း မှလွဲ၍ အဘယ်အရာကမျှကျွန်ုပ်တို့ကိုသေခြင်းမှမကယ်တင်ပါက
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » Pablo Neruda ဆိုတဲ့စကားစုကသင့်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယုံကြည်စေပါလိမ့်မယ်